Nyamavhuvhu 1, 2018 arun
Bank Ndinoda mauto Korean crypto Exchange Bithumb chokukuvadza nhoroondo itsva
Kutanga nhasi August 1st, Bithumb, mumwe 'guru ina' exchanges muKorea, hachisisiri akadzika matsva rakapotsa nyaya kuti vatengi nokuda kushaya munhu rwezvemabhengi naye. Bithumb vati Ndinoda haangavi tinzwe vatengi vanotova rakapotsa nhoroondo panguva Exchange inoshandiswa deposits uye withdrawals kuburikidza kwakabatana Maakaundi Okubhengi. For akapoteredza, South Korean regulators vakamanikidzira kuti cryptocurrency kutengesa ari chete vakabvumira kuti makambani kana zita ravo ravo kubhengi-rakapa rakapotsa nhoroondo machisi kuti Nhoroondo zita ravo panguva cryptocurrency Exchange. zvakanyatsonakanaka, cryptocurrency exchanges vari aidawo kuti vavandudze zvibvumirano zvavo nemabhangi mwedzi mitanhatu ose.
Mumiriri kubva Nonghyup Bank akati "Hatina vakasarudza vadzokorore chibvumirano nekuti Bithumb achine matambudziko pakudzivirira vatengi uye ruzivo uye kudzivisa mari laundering." Somugumisiro, Bithumb wasiiwa chete opareta pakati 'huru ina' exchanges muKorea pasina rwezvemabhengi pamwe kuti chaivo nhoroondo.
KPMG: Blockchain mari mukati US gore rino akatotora kupfuura 2017 kwakazara
Investment ari blockchain indasitiri huri kuwedzera muna US, maererano ne “Big Four” Auditing makasimba KPMG. Published ichi Chipiri, chekambani “Pulse kuti Fintech 2018” Mushumo wacho unoti chinyakare asingashumbi guta upfumi munyika US anotsanangura blockchain Makambani wokutanga hafu gore rino vave atopfuura nhamba kuti 2017. The zvinoorora mufananidzo hafu-gore negore zvishoma vanotungamirirwa $ 100M + mari kumativi nokuramba crypto mubhizimisi startup Circle Internet Finance.
KPMG US reFinancial Services Digital uye Fintech Kutungamirira Safwan Zaheer akati “pane zvakawanda VC aibuda kuwanikwa pane mikana mari, chiratidzo chaizvo kukura mune nzvimbo. Zvikuru sei, upfumi mu blockchain nekaviri yokutanga yezana 2018 zvichienzaniswa 2017. Blockchain ane zvinogona kuchinja rwezvemabhengi uye kana rwezvemabhengi hurongwa zvaifanira rewritten nhasi vaizopiwa kunobva blockchain… kwakapararira applicability kuti blockchain kubatsira joko efficiencies mukati zvemari masangano.”
Wall Street tsvakurudzo zvakasimba Fundstrat zvino anobvuma Bitcoin semubhadharo nezvechisarudzo
The Wall Street tsvakurudzo inivhesitimendi kambani, Fund Trat, zvino anogamuchira mubayiro muna Bitcoin Via Bitpay. The kambani ndehwokuti kuti muripo nyore vatengi vavo, kunyanya avo raiva kunze US, Achabvisa “hassles kuti mari rokushandura.” Thomas Lee, Fundstrat raMwari Kushandisa Partner & mumwe renound cryptocurrency muongorori akati “Fundstrat akawana kuti kubvuma kubhadhara Via BitPay ari chaizvo nyore, nokukurumidza uye kudhura pane kumahombekombe waya.”
Vaizviti kuva “wokutanga tsvakurudzo akasimba kutanga kugamuchira crypto kubhadhara kubva vatengi”, ari Bitcoin muripo sarudzo ichange ichiwanikwa nokuda vose Fundstrat kuti vatengi, izvo zvinosanganisira zvechechi vanoita, upfumi varairiri, mudyandigere mari, uye yakakwirira mambure ukoshi vanhu. Pakupedzisira, boka anogutsikana itsva mubhadharo nezvechisarudzo kuchaita “skip kudhura, kuoma muchinjikwa-muganhu waya anotamisa uye kugamuchira kana kutumira mari dzakawanda zvizere zvakarurama, razero kubiridzira pangozi uye nokukurumidza bhengi ugari.”
$10.7T twa maneja Northern Trust anovhura mabasa emari kuti Bitcoin ruzhowa mari
Financial mabasa makuru Northern Trust, iyo pokutanga 486th pamusoro Fortune 500 mazita makurusa US makambani, vakawanda vakapinda cryptocurrency mararamiro. The-gore 129 okuberekwa Chicago anotsanangura yakasimba, izvo caters kune masangano vanoita, makambani, uye yakakwirira mambure ukoshi vanhu, atanga kuvhura vamwe mabasa aro cryptocurrency ruzhowa mari ukuwo kuongorora sei nokusangana blockchain michina kupinda kwayo private zvakarurama nokupesana.
Northern Trust ave anonzi achishandira pamwe 3 "Zvikuru ruzhowa mari" kuti makatanga zvokuhwandira kuwedzera cryptocurrency upfumi kuti nemigove mumabhizimisi yavo vanotsvaka kuwana pakunzwisisa nascent asi burgeoning crypto pamusika. Northern Trust ane vanofungidzirwa $10.7 tiririyoni mune midziyo pasi muchitokisi uye adhimini, maererano Website wayo.
Cardano Moon Shot To $5.00 mu ...
Previous Post:Blockchain News 31.07.2018